Hagaajinta muuqaalka codsiyada Gtk ee Debian KDE | Laga soo bilaabo Linux
Sababtoo ah saaxiibkeyga qaaliga ah KZKG ^ Gaara bilaabay inuu qayliyo (sida caadiga) ka hor Debian iyo nooca KDE taas oo ku jirta bakhaarrada imtixaanka, maxaa yeelay tan ayaan rakibay Deegaanka Desktop si loo tuso khaladka uu galay.
Ragga fudud, wali waan isticmaalayaa Xfcerunti, waxaan ka dhajinayaa jiirkayga yar. Sikastaba, waxa aan aadayo. Waxyaabaha uu saaxiibkeen ii sheegay waxaa ka mid ahaa inuusan sameyn karin barnaamijyada gtk waxay la midoobi doonaan inta kale ee desktop-ka. Waana run aan ka yareyn sidii caadiga ahayd Firefox, Thunderbird o Pidgin waxay u muuqdaan kuwo aad u fool xun gudaha KDE.
Qeybin kale (sida Arch) kaliya rakib xirmo si aad u xalliso dhibaatadan. Gudaha Debian, baakadani waxay ku jirtaa keydka bakhaarada Sid waana loo yeedhay mashiinka gtk-qt. Si kastaba ha noqotee, sida dad badani ogaadaan inaan isticmaalo Tijaabada Debian, sidaa darteed waxaan bilaabay inaan yara eego (kaas oo saaxiibkeen uusan sameyn) oo waxaan u helay xal aad u fudud dhibaatadan.
Waxa ugu horreeya ee aan qabanno waa rakibidda matoorrada gtk lagama maarmaan:
Mar dambe waxaan fureynaa terminal oo waxaan dhignaa:
Hadda waa inaan kaliya ka xulanno Xulashada KDE ka badan codsiyada gtk isticmaalka QtCurve. Natiijada waa la arki karaa aniga Firefox:
Hadda waa inaan kaliya ku daro tilmaanta boostada Ku rakibida KDE ee Debian.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Hagaajinta muuqaalka codsiyada Gtk ee Debian KDE
MuyLinux waxaa ku jira casharro dhowr ah oo tan ku saabsan.
Laakiin kuma jirno MuyLinux 🙂
Waxaan isku dayeynaa inaan qaadhaankeena ku biirino, sikastoo ay u muuqdaan kuwa aan qiimo yareyn, hadii ay iyagu yihiin anagaa si fiican u ogaan doona 😉
Eex, laakiin waxaa jira
Taasi midna maaha 😉
Ikhtiyaar kale oo aan ka ahayn rakibidda gtk2-matoorada *, waa in la rakibo lxappearance oo aan ku sameyn karno garaaf ahaan.
Taasi tan iyo markii aan tijaabiyay debian-kayga sababo jira awgood isbeddelada lagama badbaadin guddiga KDE. Laakiin hadda waxaan heystaa ikhtiyaar kale oo aan wax ku sameeyo.
Ku rakib muuqaalka jirka, adoo hagaajinaya muuqaalka barnaamijyada GTK ee rakiban.
Waxaan ku isticmaalaa baaritaanka Debian-ka KDE 4.7.4
waan qirayaa dijo
Mahadsanid. Aad u faa'iido badan.
Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin Alpha 2 ayaa la heli karaa
Wareysiga lala yeelanayo Linus Torvalds - Jan / 2012